8 miriwo kugara takagadzirira kicheni yedu | Green Renewables
8 miriwo inogona kukura kumashure imwe mushure meimwe
Manuel Ramirez | | Kurima kwezvakatipoteredza, Ecology
Tanga tichitotaura nezvako dambudziko rekusvibiswa kwevhu uye kuti dzimwe nzvimbo dziri kudzikisira sei isu tisingazvizive nekuda kwezvinhu zvakasiyana, tichikwanisa kushandura zvirongwa izvo zvaive zvakakwana kukura mune mamwe izvo zvatove zvisingaite kudyara chimwe chinhu mavari.
Nhasi tinokuunzirai miriwo misere kuti vanogona kukura zvakare kakawanda sezvavanoda senge chives, gariki, Chinese kabichi, karoti, basil, celery, romaine lettuce kana endive, uye korianderi. Mikana misere yekugona kugara tiine mhando yezvigadzirwa zviripo kukicheni yedu uye izvo zvinotibvumidza kuti tirege kuvimba zvakanyanya nevhu kwatinozosima. Tiine hari yemaruva kana chigaba chine mvura tinogona kuva nazvo pese patinoda tisingashandise chero chinhu kuzvitenga musupamaketi.
7 Romaine lettuce kana endive
Chives inogona kukura zvakare kusiya iro rakatemwa rinenge 1 kana 2 masentimita pamudzi kuti uzviise mugirazi remvura rinovafukidza sezvaungaona mumufananidzo.
Kana gariki yatanga kumera iwo matema matipi, anogona kuve isa mundiro yegirazi ine mvura shoma. Izvo zvinomera zvine chinotapira chinotapira kupfuura gariki uye zvinogona kuwedzerwa kumasaradhi, madhishi uye mamwe marudzi eeresipi.
Chinese kabichi inogona kukura zvakare nekuiisa mumudziyo mudiki kuisa mudzi muzasi nemvura. Muvhiki imwe chete kana mbiri, inogona kuiswa muhari ine ivhu kuti ikure musoro mutsva wekakichi.
Musoro wekaroti unogona kuiswa mundiro ine mvura shoma. Isa ndiro pahwindo rehwindo kana nzvimbo ine mwenje wakanaka, uye uchave nemashizha achabuda mukarotsi kukwanisa kuishandisa mumakarotsi
Isai akati wandei mabhesiki mashizha eakawanda kana mashoma 3-4 masentimita imwe neimwe mugirazi remvura ndokuisa zvakananga muzuva. Kana iyo midzi iri masendimita maviri pakureba, idyare muhari uye pasina nguva inozoita chirimwa cheayo
Cheka hwaro hwe celery uye riise mundiro yemvura inodziya muzuva. Kana nhungirwa nemashizha zvatanga kukura pakati, zviise muhari ine ivhu kuti zvikure zviri nani.
Romaine lettuce kana endive
Isa iyo romaine lettuce inomera mune XNUMX/XNUMX sentimita mudziyo yemvura, yekuizadza kusvika pahafu yesentimita. Mushure memazuva mashoma, midzi nemidzi mitsva ichaonekwa uye inogona kuiswa muvhu.
Coriander dzinde inokura ikaiswa mugirazi remvura. Kamwe iyo midzi yareba zvakakwana, isime muhari mune yakanaka-yakavhenekerwa kamuri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Ecology » Kurima kwezvakatipoteredza » 8 miriwo inogona kukura kumashure imwe mushure meimwe
Kubata hove kwakadzika-gungwa, France inopomerwa mhosva yekureva nhema